Voice Search အတွက် Site Optimization Checklist - Semalt မှလျှို့ဝှက်ချက်များ
ယခုအချိန်တွင်အသံရှာဖွေမှုသည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်နေသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနောက် SEO ကုမ္ပဏီမှကျွမ်းကျင်သူများကမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှအသံရှာဖွေမှုသည် ၂၀% ဖြစ်ပြီးလာမည့်နှစ်တွင် ၅၀% အထိတိုးလာလိမ့်မည်ဟုပြောကြားသည်။
စာရင်းအင်းများရှိနေသော်လည်းလူတစ် ဦး အတွက်နှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်းသည်ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၏အဓိကနှင့် ဦး စားပေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မေးခွန်းများ၏အဖြေရရှိခြင်းကိုနှစ်သက်ပါသည်။ voice search လူကြိုက်များလာသည့်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာမြန်နှုန်းဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်၊ မေးမြန်းခြင်းသည်စာသားရှာဖွေမှုတစ်ခုထက် ပို၍ မြန်သည်။ ထို့အပြင်အသံရှာဖွေခြင်းသည်မသန်စွမ်းသူများအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါစို့။
ထို့ကြောင့်၊ Google Home, Siri (သို့) အနောက် Alexa မှလူကြိုက်များမှုသည်သင်၏ site ၏အကြောင်းအရာကိုပြိုင်ဘက်များထက်ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းသေချာစေရန်အချိန်တန်ပြီ။ အသံမေးမြန်းမှု ၃၅% သည်စမတ်စကားပြောသူများမှလာသည်ကိုမမေ့ပါနှင့်။ မျက်နှာပြင်လုံးဝမရှိသော၊ ပြန်ဖွင့်ရန်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးရှာဖွေမှုရလဒ် ၁၀ ခုအနက်မှမည်သူကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိပါ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် Semalt ဝန်ဆောင်မှုများ
အဘယ်ကြောင့်အသံမေးမြန်းချက်များအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက် optimization လိုအပ်သနည်း
Com Score လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏အဆိုအရ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ထက်ဝက်ကျော်သည်အသံရှာဖွေခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 2019 အစောပိုင်းတွင် Adobe သည်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမိုဘိုင်းအသုံးပြုသူ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်နေ့စဉ်အသံဖြင့်ရှာဖွေကြသည်။ SEO အလုပ်၏သင်တန်းတွင်ဆိုက်ကိုဤ ဦး တည်ရာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်ယူကေတစ်ခုတည်းရှိအသံရှာဖွေမှုမှရရှိသော ၀ င်ငွေသည်ပေါင် ၃.၅ ဘီလီယံအထိရှိနိုင်ပြီးအမေရိကန်ဈေးကွက်သည်ဒေါ်လာ ၄၀ ဘီလီယံပိုမိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရှာဖွေမှုမှအသံမေးမြန်းမှုကြောင့်သာဖြစ်သည်!
အင်္ဂလိပ်စကားပြောအင်တာနက်သည်အသံရှာဖွေခြင်းအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၏အရေးကြီးမှုကိုအသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ Runet တွင်အသံရှာဖွေမှုရှာဖွေရေးယန္တရားသည် ဦး စားပေးမဟုတ်ကြောင်း၊ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှရှာဖွေမှုအရေအတွက်သည်ကျော်လွန်နေသော်လည်း Yandex ကိန်းဂဏန်းများအရ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ အသံရှာဖွေမှု၏လူကြိုက်များမှုအတွက်ခန့်မှန်းထားသည့်တိုးတက်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စုံစမ်းမှုပြုလုပ်ရန်ဤနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်သောအသုံးပြုသူများအတွက်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်အပြင်းအထန်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။
ဒေသတွင်းစီးပွားရေးနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များအတွက်အသံရှာဖွေမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ မိုဘိုင်းအကြောင်းအရာ၏ထူးခြားချက်မှာမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်သို့ပေးပို့ခြင်းသည်အသုံးပြုသူ၏လက်ရှိတည်နေရာကိုအဓိကထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်အနီးအနားရှိတာယာဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါက၊ "အို၊ ဂူဂဲလ်! တာယာအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှု" ကိုတောင်းဆိုခြင်းဖြင့်လိပ်စာများနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အနီးဆုံးအမှတ်အသားများကိုပြလိမ့်မည်။
voice search ၌ယှဉ်ပြိုင်မှုသည်ယခုအချိန်တွင်မြင့်မားခြင်းမရှိသေးပါ။ SEO အတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောပစ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အနည်းငယ်က၎င်းကိုအာရုံစိုက်သည်။
BrightLocal ကိန်းဂဏန်းများအရဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရှာဖွေနေသည့်သုံးစွဲသူ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဖုန်းခေါ်ခြင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။ ၁၉% မှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်နေရာသို့သွားသည်။ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် site သို့သွားသည်။
သင်သည် SEO ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ ရှေ့နောက်အကြောင်းအရာကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။ ရှာဖွေမှုရလဒ်များသည်အသံရှာဖွေမှုအတွက်ရလာဒ်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နေပြီးပိုမိုတိုးပွားလာနေသည်။ ပြိုင်ဘက်များကမစတင်မှီသင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုစတင်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။
၁။ ဂန္ထဝင် SEO
Classic SEO ၏ Canon များအရ Optimized sites များသည် voice assistants ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ကြီးမားသောအခြေခံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစီစဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်မှု၊ သက်ဆိုင်ရာ metadata များ၊ ဒိုမိန်းခွင့်အာဏာ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမှားများမရှိခြင်းနှင့် SEO ၏အခြားအရေးကြီးသောကဏ္youများသည်သင့်အားအသံရှာဖွေခြင်းတွင်အဆင့်မြင့်စစ်ပွဲကိုအနိုင်ယူရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဤရိုးရာ SEO ၏အစိတ်အပိုင်းသည် voice search အပေါ်သိသာသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ Backlinko ၏လေ့လာမှုတစ်ခုအရ site search speed သည်အသံရှာဖွေမှုအဆင့်တွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ များသောအားဖြင့်အတုထောက်လှမ်းရေးသည်အသုံးပြုသူအားချက်ချင်းတုန့်ပြန်မှုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ဆန်ဆန်လွှင့်ထားသောဆိုဒ်များကိုအဓိကရွေးချယ်သည်။ ၎င်းကိုပုံမှန်ရှာဖွေခြင်းမှစာမျက်နှာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂ ဆပိုမြန်သောအသံရှာဖွေမှုမှစာမျက်နှာ၏ပျမ်းမျှအမြန်နှုန်းသည်သက်သေပြသည်။
ဂူဂဲလ်အသံရှာဖွေမှုရလဒ်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်မှာလုံခြုံသော HTTPS ပရိုတိုကော (HTTPS တွင်ဆန်းစစ်ထားသောစာမျက်နှာအားလုံး၏ ၇၀%) ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုသီးခြားစီတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ Google search engine ၏ထိပ်ဆုံးတွင် HTTPS ပရိုတိုကောလ်ပါသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များရှိပြီး (အာရုံစူးစိုက်မှု။ ) အသံရှာဖွေမှုရလဒ် ၇၅% ခန့်သည်ပုံမှန်ရှာဖွေရန်အတွက် TOP-3 တွင်ရှိသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းသည် HTTP ကိုပြောင်းလဲရန်ပိုလိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Google crawlers ကဲ့သို့ပင် AI သည်အားကောင်းသော link အစုလိုက်ရှိသော site ကိုပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ သက်သေသာဓကမှာအသံရှာဖွေမှုရလဒ်အားလုံး၏ (၇၅ ကျော် Ahrefs မှ) အဆင့်မြင့်ဒိုမိန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်လင့်ခ် ၁၀ ချက်မှရွေးချယ်သောပုံမှန်ရှာဖွေမှုရလဒ်များနှင့်မတူဘဲဂူဂဲလ်မူလစာမျက်နှာသည်အဖြေတစ်ခုသာပေးရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သူအလွန်အမင်းယုံကြည်မှုရှိသော site တစ်ခုကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။
စကားမစပ်နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနအရ, အတုထောက်လှမ်းရေးကအဖြေကိုရရှိသောကနေစာမျက်နှာ၏ link ကို၏အလေးချိန်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ အဓိကအနေဖြင့် domain ၏ link power ဖြစ်သည်။
5. စနစ်တကျဒေတာ markup
အသံရှာဖွေမှုနှင့် tagged စနစ်တကျဒေတာများနှင့်ဆိုဒ်များအကြားမြင်သာထင်သာဆက်စပ်မှုမရှိသောကြောင့်, အငြင်းပွားဖွယ်အချက်။
Google သည် Speakable ဟုခေါ်သောအမှတ်အသားအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုကိုမကြာသေးမီကအသံလက်ထောက်များမှဖတ်နိုင်သည့်စာမျက်နှာ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုညွှန်ပြရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ Speakable markup ကို US သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဂူဂဲလ်မူလစာမျက်နှာကိရိယာများဖြင့်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းအရာများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသောဂူဂဲလ်သတင်းကြေညာသူများ - ရရှိနိုင်သည်။ ထုတ်ဝေသူများ Speakable ကိုစတင်အသုံးပြုသည်နှင့် Google သည်ဤတိုင်းတာခြင်းကိုအခြားနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများအတွက်မိတ်ဆက်ပေးမည်။
Semalt မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သင်၏ရှာဖွေမှုရလဒ်ထိပ်တွင်သင်၏ site ကိုနေရာချပါ
အသံနည်းပညာဖြင့်ရှာဖွေရေးမေးမြန်းမှုများကိုပြောသောဘာသာစကားနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်ကိုထောက်ပြ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်မှာထင်ရှားပါသည်။ သုံးစွဲသူ၏မေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုတိကျစွာဖြေနိုင်လေ၊ အဖြေသည်အသံရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစာမျက်နှာများသည်၎င်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှဖော်ပြသောအဖြေများကို အခြေခံ၍ - အသံရလဒ်များ၏ ၂.၆၈% ကို FAQ စာမျက်နှာများမှရရှိသည်။ အသုံးပြုသူများအားကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သလောက်များပေးအပ်ခြင်းအပြင် FAQ စာမျက်နှာသည်အသံရှာဖွေမှုအတွက်သင့်လျော်သောပုံစံကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ မည်သည့်အခြားစာမျက်နှာတွင်မဆိုသုံးစွဲသူ၏မေးခွန်းအတွက်အတိအကျအဖြေပါရှိလျှင်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရလဒ်အဖြစ်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
ရည်ညွှန်းချက်အတွက် - အသံရှာဖွေမှုတွင်အဓိကစကားစုအတွက်သီးခြားဆင်းသက်ရန်လုံးဝမလိုအပ်ပါ။ Backlinko ၏သုတေသနအရအသံရှာဖွေမှုရလဒ်အနည်းငယ်မျှသည်ခေါင်းစဉ်တွင်သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးပါရှိသည်။ ပိုများသောဖြစ်နိုင်သည်, အတုထောက်လှမ်းရေးစာမျက်နှာ၏ contents အတွက်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့။
ရှည်လျားသောသော့ချက်စာလုံးများသည်အသံရှာဖွေမှုများနှင့်ပိုမိုထိရောက်သည်။ လူတွေကသူတို့အသံနဲ့ရှာဖွေတဲ့အခါသူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းကစာပြန်ခြင်းထက် ၃/၄ ပိုရှည်သည်။ အောက်ခြေလိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်း - သော့ချက်စာလုံးထားသောစကားစုသည်ကြာလေလေအသံဖြင့်မေးမြန်းမှုနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်လေလေဖြစ်သည်။
မေးခွန်းစကားစုသည်ရှည်သင့်သော်လည်းအဖြေကိုတိုတိုနှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင်ရေးရမည်။ အသံရှာဖွေမှုများအတွက်တိကျသောအဖြေများလိုအပ်ကြောင်းဂူဂဲလ်ကရှင်းလင်းစွာပြောကြားခဲ့သည်။ ဤအတွက်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အသံရှာဖွေမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်တစ်ခုပင်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းရှာဖွေရေးအသံရှာဖွေမှုအတွက်အဖြေတစ်ခု၏အကောင်းဆုံးပမာဏမှာ ၂၉ လုံးရှိသည်။
စာသား၏ 9. Readability
လွယ်ကူစွာဖတ်နိုင်သောအကြောင်းအရာသည်ဉာဏ်ရည်တု၏အဓိကကောင်းကျိုးများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်သည် - ဖတ်ရန်လွယ်ကူသောစာသားသည်ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်လွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင် voice search algorithm သည်နားလည်ရလွယ်ကူသောအကြောင်းအရာများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
ဆိုက်သို့စာသားထည့်သောအခါ၊ သတင်းအချက်အလက်ကိုနားဖြင့်ပြန်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်ဟုသတိရပါ - အသုံးပြုသူများကိုဂရုစိုက်ပါ။ မည်သည့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုမဆို အသုံးပြု၍ စာသား၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးပါ။
၁၀။ အဖြေများ (သို့) ထူးခြားသည့်အတိုကောက်များဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်း
အဖြေလုပ်ကွက်များသည်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုရလဒ်၏ထိပ်ဆုံးတွင် "သုညအနေအထား" တွင်ရှိနေပြီးအသုံးပြုသူ၏တောင်းဆိုမှုကိုတိုက်ရိုက်တိုတောင်းသောအဖြေပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Featured Snippets များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ဤလုပ်ကွက်များမှအသံ algorithms သည် ၄၀% သောတုံ့ပြန်မှုများကိုတက်စေသည်။
bullet lists, tables, chunk တွေကိုသုံးပါ။
၁၁။ ဒေသခံ SEO
Local Search optimization သည် voice search အတွက်လည်းအရေးကြီးသည်။ အသံရှာဖွေရေးမေးမြန်းမှု၏ထက်ဝက်နီးပါးသည်ဒေသဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ "ဂူဂဲလ်၊ ငါ့အနားမှာဘယ်စားသောက်ဆိုင်တွေညသန်းခေါင်အထိဖွင့်ထားသလဲ" ဒေသခံရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူပုံမှန်အသံမေးမြန်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ voice search သည်ဒေသခံအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်သင့်လျော်သည်။
အဆိုပြုထားသောနယ်ပယ်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ဒိုင်ခွက်ကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပါ။ Google က၎င်းကိုရှာဖွေခြင်းရလဒ်အဖြစ်ရွေးမလားသင်၏ Google My Business ကဒ်၏အချက်အလက်ပမာဏပေါ်မူတည်သည်။
ဂူဂဲလ် My Business -“ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ” ရှိလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဂရုပြုပါ။ ဤအပိုင်းကိုအလွတ်ထားလေ့ရှိသည်၊ သို့သော်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများစွာဖန်တီးပေးသောကြောင့်၎င်းသည်အသံရှာဖွေမှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဤတွင်အသုံးပြုသူသည်အဖြေများကိုရှာဖွေပြီးစီးပွားရေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုရှာဖွေမှုရလဒ်မှတိုက်ရိုက်လေ့လာလိမ့်မည်။
မဟုတ်ပါ၊ လူမှုရေးအချက်များသည်အသံလက်ထောက်များအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ပါ။ ဤအချက်သည်လူကြိုက်များသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများသည်အသံရှာဖွေမှုရလဒ်များအတွက် ဦး စားပေးဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ အခြေအနေတစ်ခုသည်ဒိုမိန်း၏ချိတ်ဆက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည် - အတုဥာဏ်ရည်သည်သတင်းအရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့် voice assistant သည် Facebook ရှယ်ယာတစ်ထောင်ကျော်နှင့် tweets ၄၅ ခုပါသည့်အကြောင်းအရာကိုရွေးချယ်သည်။
အသံရှာဖွေခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပုံမှန်ရှာဖွေမှုရလဒ်များရဲ့ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုမှာရှိတဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုအာမခံသည်။ ထို့ကြောင့်အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာရာထူးမြင့်မားရန်အတွက် site ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။
ခိုင်လုံသော backlinks ရယူပါ။
ဒေသအလိုက်သင်၏ site ကိုမြှင့်တင်ရန်။
တစ် ဦး နယ်ပယ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာ။
၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏ကျေးဇူးကြောင့်ယနေ့ခေတ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုမြင်သာစေရန်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုကိုးကားရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်အသံရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့သောခေတ်မှီသောနည်းလမ်းသစ်များကိုပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့ခြင်းကသင့်အတွက်အကျိုးရှိသည်။
SEO သည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်မှာထင်ရှားသည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်မြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်သည်သင့်ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုပါသည် Semalt သောသင်ထူးခြားတဲ့ SEO ဆိုသည်မှာဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။
Semalt ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်လိုချင်သောရလဒ်များကိုအမြန်ရရှိရန်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးထက်သင်အမြန်ဆုံးရွေးချယ်နိုင်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှု နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်။